Hangiiwwan Maxxansa Gulaali
Hangii Maxxansaa ramadaee akka foyyeesituu si heeyyama.
Harkaa mirgaa sanduuqa barruutti,maqaan ykn wabiin hangii maxxansa galchuu dandeessa.Yoo qareen sanduuqa barruuHangii Maxxansa keessa taate,hantuutee keetiin wardii keessatti hangii maxxansa filachuu dandessa.
Tokko tokko fuulaa irratti maxxansuuf tarrewwan tokko ykn isaa olii fili. Sanduuqa barruu sirrii keeessatti wabii tarree galchii, fakkeenyaaf, "1" ykn "$1" ykn "$2:$3". sanduuqni tarree -Hiika Fayyadamaa- agarsiisa. Akkaasumaas tarree deddebi'aa hiikamee haquuf-homa- filachuu dandeessa.
Akkasumas wardii irraa hantuutee harkisuun tarreewwaan deddebi'aa hikamee ramaduu dandeessa,yoo qareen qaaqa dirree barruuTarrewwan irradeebi'amuu keessa taate.
Tokko tokko fuulaa irratti maxxansuuf tarjaawwan tokko ykn isaa olii filiSanduuqa barruu sirrii keeessatti wabii tarjaa galchii,fakkeenyaaf,"A" ykn "AB" ykn "$c:$E". Sanduuqni tarjaa -Hiika Fayyadamaa- agarsiisa.Akkaasumaas tarjaa deddebi'aa hiikamee haquuf-homa- filachuu dandeessa
Akkasumas wardii irraa hantuutee harkisuun tarjaawwaan deddebi'aa hikamee ramaduu dandeessa,yoo qareen qaaqa dirree barruutarjaawwan irradeebi'amuu keessa taate.
Title is: Hangiiwwan Maxxansa Gulaali